I-Realme 3: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa okusemthethweni | I-Androidsis
U-Realme usishiyile neefowuni ezininzi kwezi veki zidlulileyo. Uhlobo lwentengiso, oluncedisayo lwe-OPPO, luthethile C2 kunye 3 Pro, Ibizelwe ukuba ibe yiflegi yayo entsha. Iimodeli ezimbini ezifika ngoku ukuba luphawu iqala inkqubo yayo yolwandiso lwamanye amazwe. Inkqubo abaza kuthi bayenze ngayo thengisa iifowuni eYurophu. Ngoku, ifowuni entsha iboniswa kwiwebhusayithi yayo, iRealme 3.
Le Realme 3 sesinye isixhobo sophawu kuluhlu oluphakathi. Inikwe njengenguqulelo ethobekileyo ye-3 Pro, eboniswe kwiiveki ezimbini ezidlulileyo. Babheja kuyilo lwangoku, kodwa ngokubalula okulula. Yonke into ibonisa ukuba le modeli iza kufika naseYurophu. Kuba kuhlobo lwehlabathi lwewebhusayithi ikwabonakala kuwo wonke umntu.
Ifowuni sele ibonisiwe kwiwebhusayithi yenkampani, apho sinokubona uyilo lwayo, imigaqo, ukongeza kwixabiso eliza kuphehlelelwa ngalo ezivenkileni, kwimeko yentengiso e-India. Ke sele siyibona njengesixhobo esisemthethweni. Iya kuqala ukwaziswa e-India nase China, apho uphawu lwenza ungeniso lwalo ngokusemthethweni. Sikuxelela yonke into malunga nale modeli.
1 Ukucaciswa kweRealme 3
Ukucaciswa kweRealme 3
Ngokwendlela yoyilo, uphawu lujoyina imeko yangoku. Ke ngoko sine inotshi ekubunjweni kwethontsi lamanzi Kwiskrini sakho. Kwaye ngasemva ikhamera kabini, ukongeza ekuboneni imibala eneziphumo zegradient kwezinye iinguqulelo zayo. Ke ngoko iyahambelana nezinto eziza kwenza ukuba ithandwe kwimarike. Oku kukucaciswa kweRealme 3:
Isikrini: 6,22 intshi nge-HD + isisombululo (1.520 x 720 pixels) kunye ne-19: 9 ratio
Ukugcina ngaphakathiI-32/64 GB
Cámara trasera: 13 + 2 MP ngokuvula f / 1.8
Ikhamera yangaphambiliI-13 MP
Ibhetri: I-4.230 mAh
ConectividadI-SIM ezimbini, i-WiFi 802.11 a / c, iBluetooth 4.2, i-USB encinci, i-3,5 mm jack, i-GPS
abanyeIsivamvo esingasemva somnwe, ukubonwa kobuso
Inkqubo yokusebenzaI-Android Pie enombala we-OS 6
Ubukhulu: 156,1 x 75,6 x 8,3 mm
U bunzima: Iigram ezili-175
Ngokubanzi, siyabona ukuba le Realme 3 iboniswe njengokhetho olulungileyo phakathi kuluhlu oluphakathi. Isixhobo ngaphandle kwamaqhinga amaninzi, kodwa oko kusebenza kakuhle. Uyilo lwangoku, kunye nescreen esineefreyimu ezincinci kwaye sinekhamera engasemva kabini kuyo, ene-AI. Ukongeza kwimisebenzi enjengemo yobusuku kuyo. Ibhetri ngokungathandabuzekiyo yenye yeefowuni, ngomthamo olungileyo we-4.230 mAh. Ngokudibeneyo nePie ye-Android kunye nemisebenzi yolawulo lwebhetri, siya kuba nokuzimela okuhle.
Njengoko kuqhelekile kwiifowuni ezininzi phakathi kuluhlu oluphakathi, sinenzwa yeminwe kunye nokubonwa kobuso kwifowuni. Ke ngoko, abasebenzisi banokukhetha indlela abayifunayo xa bevula ifowuni. Ukukhethwa kweprosesa yinto enokuthi ingathandwa ngumntu wonke, okoko kusetyenziswa iHelio P70 evela kwiMediaTek. Nangona sesinye sezitshixo xa kuziwa ekugcineni ixabiso lefowuni liphantsi kakhulu. Ukongeza, iiprosesa zohlobo lweChinese ziphucule kakhulu ekuhambeni kwexesha. Ke sinokulindela ukusebenza kakuhle kuyo.
Le Realme 3 sele iyathengiswa eIndiya, njengesiqhelo, kuba yeyona ntengiso iphambili yale nkampani. Sifumana iinguqulelo ezimbini zesixhobo ngokwe-RAM kunye nokugcinwa. Olona hlobo lusisiseko lwesi sixhobo, nge-3/32 GB iza nexabiso lama-8.999 ama-rupee amaNdiya emalunga nee-117 zeerandi zokutshintsha. Mhlawumbi ixabiso layo liphezulu ekusungulweni kwayo eYurophu. Okwangoku akukho mihla yokuqaliswa kwayo ngaphandle kwe-India.
Abo banomdla kule Realme 3 baya kuba nakho ukukhetha phakathi kwemibala eliqela. Kwelinye icala sinombala omnyama, ukongeza kwiinguqulelo ezimbini ezinemibala ethandwayo yegreyidi. Iinguqulelo i-Radian Blue (luhlaza okwesibhakabhaka kunye ne-turquoise) kunye neDynamic Black (ukusuka emnyama ukuya emfusa). Siyathemba ukuva ngakumbi malunga nokukhululwa kwayo kungekudala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Realme 3 ngoku isemthethweni: Iyavela kwiwebhusayithi yophawu
I-LG G8 ifumana olona vavanyo ludumileyo lokunyamezela